Viral Post Archives - Hamro eSansar
February 16, 2019 February 16, 2019 adminLeaveaComment on ‘लुट्न सके लुट् कान्छा..‘ गीत युट्युबबाट हट्यो : के भन्छन् पशुपति ?
Lutna Sake Lut – गायक पशुपति शर्माको नयाँ गीत‘लुट्न सके लुट् कान्छा..’ सार्वजनिक भएको दोस्रो दिन युट्युब च्यानलबाट हटेको छ । शर्माको युट्युब च्यानलमा शुक्रबार सार्वजनिक भएको गीत शनिबार नेपालको युट्युब ट्रेन्डिङमा १० औं नम्बरमा परेको थियो । ‘लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुटअरु देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट‍..’ सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा भ्रष्टचारका […]
हामीहरुलाई कत्तिकाे माया अनि साथ दिनुहुन्छ ? देशकाे सेवामा सधैं खटिने छाैं। शेयर गरि सबैमाझ पुर्‍याईदिनुहाेला ।
February 2, 2019 adminLeaveaComment on हामीहरुलाई कत्तिकाे माया अनि साथ दिनुहुन्छ ? देशकाे सेवामा सधैं खटिने छाैं। शेयर गरि सबैमाझ पुर्‍याईदिनुहाेला ।
साम्राज्ञीको ट्याटु मोह , के लेखिएको छ ट्याटुमा ?
February 3, 2018 February 3, 2018 adminLeaveaComment on साम्राज्ञीको ट्याटु मोह , के लेखिएको छ ट्याटुमा ?
नायक आर्यन सिग्देल र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको एउटा तस्बिर सार्वजनिक भए संगै यतिबेला ति तस्बिरहरुले निकै चर्चा पाइरहेको छ । सार्वजनिक तस्बिरमा आर्यनको घाटीमा गितारको ट्याटु देखिएको थियो । आर्यनले उक्त ट्याटु चलचित्र ‘कायरा’का लागि बनाएका थिए ।आर्यनको सो ट्याटु सार्वजनिक भएसँगै उनी चलचित्रमा सांगीतिक क्षेत्रमा लागेको एक कलाकर्मीको भूमिकामा रहेको वुझन् सकिन्थ्यो । […]
Aanshu Ko Artha by Shiva Pariyar
January 17, 2018 January 17, 2018 adminLeaveaComment on Aanshu Ko Artha by Shiva Pariyar
Aanshu Ko Artha by Shiva Pariyar Suhana Creation Proudly Presents “Official Music VIdeo Of New Nepali Song Aanshu Ko Artha by Shiva Pariyar.” Album : Shivalaya Lyrics :Rabi adhikari Music:tanka Buddhathoki Arranger : Rhythm kandel Mixed/Mastered : Maheswor Man Rajbhandari Studio:Sound Mill Feat : Swastima Khadka/Aakash Shrestha MUA:Saraswati Joshi Camera :Buddha Thapa Visual Edit : […]